Pop! _OS 21.04 ifika neCOSMIC, uphuculo kunye nokunye | Ubunlog
Zimbalwa iintsuku ezidlulileyo System76 (Inkampani ekhethekileyo kwimveliso yeelaptops, iiPC kunye neeseva ezithunyelwa ngeLinux) ubhengeze ukumiliselwa kwenguqulelo entsha ye ukuhanjiswa kweLinux «Pop! _OS 21.04 », apho eyona nto iphambili kukudityaniswa kwendawo entsha yedesktop «cosmic».
Njengoko kukhankanyiwe egameni lenguqulelo entsha, Isekwe kwi-Ubuntu 21.04. Ngaphambi kokukhutshwa kwePop! _OS 21.04, usasazo luze ne-GNOME Shell eguqulweyo, iseti yeeplagi zangaphambili ze-GNOME Shell, umxholo wayo, iiseti zayo zeempawu, ezinye iifonti (iFira ​​kunye neRoboto Slab), iisetingi eziguqulweyo, kunye neseti eyandisiweyo yabaqhubi.
KwiPop! _OS 21.04, i-desktop ye-GNOME eguqulweyo ithathelwe indawo yindawo entsha I-COSMIC (Amacandelo oPhiko oluPhambili lweNkqubo yokuSebenza kweKhompyuter), ephuhliswa phantsi kwelayisensi yeGPLv3.
I-COSMIC iyaqhubeka nokusebenzisa itekhnoloji ye-GNOME, kodwa ineenguqulelo zengqondo kunye nokuyila kwakhona Useto olunzulu lwedesktop oluhamba ngaphaya kongezo kwiGNOME Shell. Ngexesha lokuphuhliswa kweCOSMIC, imisebenzi enjalo yasekwa njengomnqweno wokwenza ukuba kube lula ukusebenzisa i-desktop, ukwandisa ukusebenza, kunye nokwandisa ukusebenza ngokuziqhelanisa nokusingqongileyo ukuze kulungele ukhetho lwakho.
Endaweni yokuhamba ngokuthe tyaba Ukudibanisa iidesktops kunye nezicelo kwimisebenzi ejonge ngaphezulu ebonakala kwi-GNOME 40, I-COSMIC iyaqhubeka ukwahlula iimbono zokuhamba zivule iidesktops / iifestile kunye nezicelo ezifakiweyo (amacandelo eendawo zokusebenza kunye nokusetyenziswa). Umbono wokwahlula-hlula ukukunika amandla okufikelela kukhetho lwezicelo ngonqakrazo olunye, kwaye ubeko olulula luya kukuvumela ukuba ungaphazamisi kwizinto ezingqubanayo.
Ukulungiselela iwindows, zombini imowudi yolawulo lwempuku ngokwesiko, eyaziwayo kwabaqalayo, enje ngemowudi yoyilo lwewindows, ekuvumela ukuba ulawule umsebenzi wakho ngekhibhodi kuphela.
Kwimowudi yethayile, ungasebenzisa imouse ukuphinde ulungelelanise ii-windows ezibekiwe ngokunqakraza kunye nokutsala iwindow kwindawo oyifunayo. Xa uyiqala okokuqala, kuziswa iseti yokuqala, ekuvumela ukuba ukhethe indlela yokuziphatha kunye nembonakalo yedesktop efanelekileyo kwiimfuno zakho.
Kwiphaneli, unako ukwenza okanye ukhubaze amaqhosha ukubiza ujongano ukuhamba windows ezivulekileyo kunye nokusetyenziswa, hambisa iiwijethi ngewotshi kunye nendawo yokwazisa kwikona ephezulu ngasekhohlo okanye ekunene, cwangcisa umnxeba kumlawuli obonisa isixhobo sokuqalisa xa ususa isalathiso sempuku kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini.
Xa ucinezela isitshixo seSuper, isikhombimsebenzisi sokuqalisa siqala ngokungagqibekanga, esenza ukuba sikwazi ukuqala usetyenziso, ukusebenzisa imiyalelo engenakuphikiswa, ukubala amabinzana emathematika, ukuya kumacandelo athile esiqwalaselo, kunye nokutshintsha phakathi kweenkqubo esele zisebenza.
Kulawulo, Ukongeza kwii-hotkeys, ukubanakho kokusebenzisa izijekulo zolawulo kubonelelwe kwitrackpad. Umzekelo, ucofe umnwe kwiminwe emine ngasekunene usungule ujongano lokuhamba kwesicelo, ukuya ngasekhohlo kubonisa uluhlu lweefestile ezivulekileyo, kunye nokutshintshela phezulu / ezantsi kwenye idesktop ebonakalayo. Ngokuhamba ngempompo yeminwe emithathu, utshintsha phakathi kweefestile ezivuliweyo.
Phakathi kweempawu zenguqulo entsha, nayo ukubonakaliswa kokukhetha kwamaqhosha kubonakalisiwe ukunciphisa kunye nokwandisa iwindow(ngokungagqibekanga, kuphela libonisa iqhosha lokunciphisa), inkxaso yokuhlaziya 'ukwahlula' idiski, ialgorithm entsha yokumisela ukubaluleka kokukhangela iinkqubo, inkqubo ye-plug-in yokwandisa amandla okukhangela kwi-pitcher.
Gqibela ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo malunga noku kukhutshwa okutsha, unokujonga iinkcukacha Kule khonkco ilandelayo.
Khuphela iPop! _OS 21.04
Ukuze ufumane le nkqubo intsha yomfanekiso kwaye ufake olu setyenziso lweLinux kwikhompyuter yakho okanye ufuna ukuyivavanya phantsi komatshini obonakalayo. Kuya kufuneka uye kwiwebhusayithi esemthethweni yokuhambisa kunye nakwicandelo lokukhuphela onokufumana umfanekiso wenkqubo.
Ngokumalunga nabantu abanoguqulelo oludala, banokuphucula baye kwinguqulelo entsha ngokuchwetheza le miyalelo ilandelayo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » Ulwabiwo olusekwe kubuntu » Pop! _OS 21.04 ifika neCOSMIC, uphuculo kunye nokunye
IMozilla sele ivavanya izithonjana ezixhasiweyo kwiFirefox "kwakhona"
IVideomass, i-GUI enqamlezileyo yeFFmpeg kunye ne-youtube-dl